Amaxesha aQinisekisiweyo ama-5 okuThumela iiMeyile zakho eziZenzekelayo | Martech Zone
Singabalandeli abakhulu bee-imeyile ezizenzekelayo. Iinkampani zihlala zingenazo izixhobo zokuchukumisa ithemba ngalinye okanye umthengi rhoqo, ke ii-imeyile ezizenzekelayo zinokuba nefuthe elimangalisayo kwisakhono sakho sokunxibelelana nokukhulisa zombini izikhokelo zakho kunye nabathengi. U-Emma wenze umsebenzi omnandi wokudibanisa le infographic ephezulu I-5 ezona zisebenzayo ze-imeyile ezizithumelayo.
Ukuba kumdlalo wentengiso, sele uyazi ukuba oomatshini abazihambelayo ngundoqo ekufikeleleni kubaphulaphuli abalungileyo ngexesha elifanelekileyo. Kodwa uyazi ukuba yeyiphi i-imeyile ezenzekelayo eya kukufumanela eyona buck yakho intengiso?
Nini kwaye kutheni Thumela ii-imeyile ezizenzekelayo
Wamkelekile ii-imeyile Ngaba i-86% isebenza ngakumbi kuneleta zeendaba ze-imeyile.
Ukukhulisa ii-imeyile ivelise i-47% yokuthengwa okukhulu kunokungakhokelwa.
Enkosi ii-imeyile yenze ingeniso ephindwe kali-13 kunokuthumela ngeposi.
Iimeyile Zokuzalwa phakamisa amaqondo okuguqula ngama-60% ngaphezulu kwezinye i-imeyile ngesithembiso esifanayo.
Ukuzibandakanya kwakhona ii-imeyile ukuqhuba nokuzibandakanya ngakumbi, i-45% yabamkeli ifunde imiyalezo elandelayo.
Ngelixa abantu abaninzi bekholelwa ukuba unxibelelwano lwe-imeyile oluninzi lunokuba nefuthe elibi kwimizamo yakho yokuthengisa, imiyalezo ezenzekelayo enje ayimiswanga ngobuninzi. Oko kunokunciphisa amathuba akho okubaleka kwimicimbi yokuhanjiswa. Kwaye ekubeni zenzelwe umntu kwaye zifike ngexesha, zinokonyusa ukubandakanyeka kakhulu. Oko kuthetha ukuba kuvulwa ngakumbi, amaxabiso angcono okucofa kunye nokuguqulwa.
tags: ii-imeyile ezizenzekelayoesizisebenzelayoii-imeyile zokuzalwainqanaba lotshintshoi-imeyile ezenzekelayoizinga lokuguqulwa kwe-imeyilei-imeyile evulekileyomyemmaukondla ii-imeyileizinga elivulekileyoamazinga avulekileyoukwenza ii-imeyile kwakhonaenkosi imeyilewamkela ii-imeyile
Nov 26, 2015 kwi-5: 47 AM
Enkosi ngeengcebiso! Ndiza kuyigcina engqondweni ngexesha elizayo xa ndisebenzisa i-GetResponse.